अध्याय ९१ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरो आत्मा बोल्छ र नियमित रूपमा मेरो आवाज निकाल्छ—तिमीहरूमध्ये कति जनाले मलाई चिन्न सक्छौ? म किन देह बन्नुपर्छ र तिमीहरूको माझ आउनुपर्छ? यो ठूलो रहस्य हो। तिमीहरू दिनभरि मेरो बारेमा सोच्छौ र मेरा लागि लालायित हुन्छौ, र तिमीहरू मेरो प्रशंसा गर्छौ, मेरो आनन्द लिन्छौ, दैनिक रूपमा मबाट खान्छौ र पिउँछौ, र आजसम्म पनि तिमीहरू मलाई अझै चिन्दैनौ। तिमीहरू कति अज्ञानी र अन्धो छौ! तिमीहरूले मलाई कति थोरै चिन्छौ! मेरो इच्छालाई तिमीहरूमध्ये कति जनाले बुझ्छौ? अर्थात्, तिमीहरूमध्ये कति जना मलाई चिन्न सक्छौ? तिमीहरू सबै दियाबलस जस्ता छौ, तैपनि तिमीहरू मेरो इच्छालाई सन्तुष्ट बनाउन चाहन्छौ? यो कुरालाई बिर्सिदे! म तँलाई यो भन्छु: शैतानका कार्यहरू जतिसुकै राम्रा भए पनि, ती कार्यहरू मेरो निर्माणलाई विनाश गर्ने र मेरो व्यवस्थापनमा बाधा पुर्‍याउने आशयका हुन्छन्। त्यसका कार्यहरू जतिसुकै राम्रा भए पनि, यसको सार परिवर्तन हुँदैन—यसले मेरो विरोध गर्छ। तसर्थ, धेरै मानिसहरू अनिच्छामै मेरो हातबाट आक्रमणमा परेका छन् र मेरो परिवारबाट अन्जानमा बाहिर निकालिएका छन्। आज, मानिसले एउटा कुरा पनि (ठूलो वा सानो जस्तो भए पनि) योजनाबद्ध गर्दैन; सबै कुरा मेरो हातमा छन्। यदि सबै कुरा मानिसको नियन्त्रणमा छ भनेर कसैले भन्छ भने, तैँले मेरो विरोध गर्छस् भनेर म भन्छु, र म तँलाई निश्‍चित रूपमा कठिन सजाय दिनेछु र तेरो शिर लुकाउने ठाउँ पनि नपाउने गरी तँलाई छोडिदिन्छु। सबै घटना र कुराहरूमध्ये, कुन चाहिँ मेरो हातमा छैनन्? कुन कुरा चाहिँ मबाट निश्‍चित, वा मबाट निर्धारित गरिएको होइन? र अझै पनि तँ मलाई चिन्ने कुरा गर्छस्! यी दियाबलसका शब्दहरू हुन्। तैँले अरूलाई ठगेको छस्, त्यसैले तैँले मलाई पनि ठग्न सक्छस् भन्‍ने तँलाई लाग्छ? तैँले गरेको कुरा यदि कसैलाई थाहा छैन भने, त्यसबाट केही प्रतिफल आउनेछैन भन्‍ने तँलाई लाग्छ? तँ सजिलै फुत्केर जान पाउँछस् भनेर नसोच्! मैले तँलाई मेरो अगाडि घुँडा टेकाउनु र बोल्न लगाउनु पर्छ। नबोल्नु स्वीकार्य हुँदैन; यो मेरो प्रशासनिक आदेश हो!
के तिमीहरूले मेरो आत्मा को हो र मेरो देहको रूप को हो भनेर वास्तवमै बुझ्छौ? मेरो देहधारणको महत्त्व के हो? यो महान् विषयमा तिमीहरूमध्ये कसले ध्यानपूर्वक चिन्तन गरेको र मबाट केही खुलासा प्राप्‍त गरेको छ? तिमीहरूले सबै आफैँलाई मूर्ख बनाइरहेका छौ! तिमीहरू ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्ततिहरू हौ भनेर म किन भन्छु? आज, म तिमीहरूलाई मेरो देहधारणको रहस्य खुलासा गर्छु, एउटा यस्तो रहस्य जसलाई मानिसले संसारको सृष्टि भए यता सुल्झाउन सकेको छैन, जसले मेरो घृणाका धेरै पात्रहरूलाई बरबाद तुल्याएको छ। र आज पनि यो यस्तै छ। मेरो देहको कारण, मैले प्रेम गरेकाहरू धेरै जना सिद्ध भएका छन्। म वास्तवमा देह किन बन्नुपर्छ? म जस्तो देखिन्छु त्यसरी म किन देखा पर्छु (सबै कुरामा, मेरो उचाइ, स्वरूप, कद र आदि इत्यादि लगायत कुरामा)? यसका बारेका कसलाई के भन्नु छ? मेरो देहधारणमा यति धेरै महत्त्व छ कि ती सबै कुरालाई भन्नै सकिन्न। अब म तिमीहरूलाई यसको केही भाग बताउँछु (मेरो कामका चरणहरू यहाँसम्म आइपुगेका छन्, मैले यो कुरा भन्नै र बोल्नैपर्छ): मेरो देहधारण प्राथमिक रूपमा मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूप्रति निर्देशित छ, ताकि मैले तिनीहरूलाई गोठालो गर्न सकूँ, ताकि तिनीहरू मसँग आमनेसामने भएर, छलफल गर्न र बोल्न सकून्; साथै यसले म र मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू एक-अर्काप्रति घनिष्ठ छौं भनेर पनि देखाउँछ (अर्थात् हामी सँगै खान्छौं, सँगै बस्छौं, सँगै जिउँछौँ, र सँगै कार्य गर्छौं), ताकि वास्तविकतामा तिनीहरू मद्वारा खुवाइन सकून्—यी रित्ता वचनहरू होइनन्, बरु वास्तविकता हुन्। पहिले, मानिसहरूले ममा विश्‍वास गर्थे तर वास्तविकतालाई बुझ्न सक्दैनथिए, किनभने त्यो बेला मैले देहधारण गरेको थिइन। आज, मेरो बोली र व्यवहार र मैले मामलाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सिद्धान्तहरूमार्फत मेरो देहधारणले तिमीहरूलाई सबै वास्तविकता बुझ्न दिन्छ र मलाई साँचो रूपमा प्रेम गर्नेहरूलाई मलाई—बुद्धिमानी परमेश्‍वर स्वयम्‌लाई—चिन्ने तुल्याउँछ। मलाई इमानदार भएर नखोज्नेहरूलाई यसले मेरो अव्यक्त कार्यहरू अर्थात् मेरो मानवता देखाउँछ, र त्यसपछि मेरो विरोध गर्ने, र मेरो आक्रमणमा परेर “कुनै कारणविना नै मृत्यु वरण गर्ने” तुल्याउँछ। शैतानको बेइज्जत गर्दा, देहधारणले मेरो लागि सबैभन्दा गुञ्जायमान गवाही दिन्छ; म देहबाट अगाडि आउन मात्रै सक्दिन, बरु म देहभित्र जिउन पनि सक्छु। मलाई कुनै स्थान विशेष वा भौगोलिक अर्चनले रोक्दैन; मेरा लागि, त्यस्ता कुनै पनि अवरोधहरू छैनन्, र सबै कुरा निर्बाध रूपमा बग्छन्। यसमा नै शैतान सबैभन्दा बढी लज्जित हुन्छ, र जब म देहबाट अगाडि आउँछु, म मेरो देहमा अझै काम गर्छु, र म अलिकति पनि प्रभावित हुँदिन। म अझै पनि हिमाल, नदी, ताल, र ब्रह्माण्डका प्रत्येक कुनाका साथै त्यसमा भएका बहुसङ्ख्यक कुराहरूउपर सवार हुन्छु। मबाट जन्मिएका तर मेरो विरोध गर्नका लागि खडा भएका सबैको खुलासा गर्न मैले देहधारण गरेको हुँ। यदि म देह नभएको भए, तिनीहरूको खुलासा गर्ने कुनै उपाय हुँदैनथियो (यसले मेरो अनुहार अगाडि एउटा तरिकाले कार्य गर्ने र मेरो ढाड पछाडि अर्कै तरिकाले कार्य गर्नेहरूलाई जनाउँछ)। यदि म आत्मा नै रहेको भए, मानिसहरूले तिनीहरूको धारणाहरूमा मेरो आराधना गर्थे, र म निराकार र अगम्य परमेश्‍वर हुँ भनेर सोच्नेथिए। आज मेरो देहधारण मानिसहरूको धारणाको ठीक विपरीत छ (मेरो उचाइ र स्वरूपको कुरा गर्दा), किनभने उहाँ सामान्य देखिनुहुन्छ र धेरै अग्लो हुनुहुन्न। शैतानलाई सबैभन्दा बढी अपमानित बनाउने र मानिसहरूको धारणाहरू (शैतानको ईश्‍वर निन्दा) विरुद्ध सबैभन्दा शक्तिशाली प्रत्याक्रमण यही बुँदा हो। यदि मेरो स्वरूप अरूको भन्दा भिन्न थियो भने, त्यो कष्टप्रद हुनेथियो—सबै जना तिनीहरूको आफ्नै धारणाहरूमार्फत मेरो आराधना गर्न र मलाई बुझ्न आउनेथिए, र तिनीहरूले मेरो लागि सुन्दर गवाही दिन सक्नेथिएनन्। तसर्थ, मसँग आज भएको छविलाई नै मैले आत्मसात् गरेँ, जुन बुझ्नलाई गाह्रो छैन। सबै जना मानव धारणाहरूबाट बाहिर आउनुपर्छ र शैतानका धूर्त योजनाहरूबाट झुक्किनु हुँदैन। मेरो कामको आवश्यकताअनुसार म तिमीहरूलाई भविष्यमा, एक-एक गरी, थप कुरा बताउनेछु।
आज, मेरो महान् कामले सफलता हासिल गरेको छ, र मेरो योजना पूरा भएको छ। मैले एकल, संयुक्त मनले मसँग सहकार्य गर्ने मानिसहरूको समूह प्राप्‍त गरेको छु। यो मेरा लागि सबैभन्दा महिमावान् समय हो। मेरा प्रिय पुत्रहरू (मलाई प्रेम गर्ने सबै), मसँगै, मैले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू पूरा गर्न, मसँगै एउटा हृदय र मनको हुन सक्छन्। यो आश्‍चर्यजनक कुरा हो। आज उप्रान्त, मैले प्रतिकूल रूपमा लिनेहरूसँग पवित्र आत्माको कार्य हुनेछैन, जसको अर्थ मैले विगतमा भनेका कुराहरू अनुरूप नहुनेहरूलाई म त्याग्नेछु। मैले भनेको कुराहरूलाई मानिसहरूले सिद्ध रूपमा अनुसरण गर्नुपर्छ। यो कुरालाई याद राख्! तैँले सिद्ध रूपमा अनुसरण गर्नुपर्छ। गलत रूपमा नबुझ्; सबै कुरा ममा निर्भर छन्। मानिसहरू—मसँग सर्तहरूको कुरा नगर। यदि मैले तँ योग्य छस् भनेर भनेँ भने, त्यो अकाट्य हुन्छ; यदि मैले तँ योग्य छैनस् भनेर भनेँ भने, पीडित जस्तो नबन् र स्वर्ग र पृथ्वीलाई आरोप नलगा! यो सबै मेरो प्रबन्ध हो। आफैलाई अनादर गर्न तँलाई कसले अह्रायो? निन्दनीय मूर्ख काम गर्न तँलाई कसले अह्रायो? तैँले केही भनिनस् भने पनि, तैँले मबाट सत्य लुकाउन सक्दैनस्। मानिसको अन्तस्करणको परीक्षण गर्ने म परमेश्‍वर स्वयम् हुँ भनेर मैले भन्दा मेरा वचनहरू कसका लागि भनिएका हुन्? मैले यो बेइमानहरूका लागि भनेको हो। कति निर्लज्ज—मेरो ढाड पछाडि यस्तो कुरा गर्ने! के तँ झूट बोलेर मलाई झुक्याउन चाहन्छस्? यो यति सजिलो छैन! तुरुन्तै यहाँबाट निस्किहाल्! विद्रोहीको छोरो! तैँले आफूलाई प्रेम गर्दैनस्, र तैँले आफूलाई आदर गर्दैनस्! तैँले आफ्नो बारेमा विचार गर्दैनस्, तर पनि मैले तँलाई प्रेम गरेको चाहन्छस्? यस्तो कुरा बिर्सिदे! यस्तो प्रतिरूपको एउटा पनि दुष्ट मलाई चाहिँदैन। तिमीहरू सबै जना मबाट टाढा जाओ! यसले मेरो नाममा सबैभन्दा गम्भीर अपमान ल्याउँछ; यदि तिमीहरूले यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्दैनौ भने, यसले केही हुनेवाला छैन। यो दुष्ट र चरित्रहीन पुरानो युगमा भएको कुनै पनि फोहोरबाट प्रदूषित हुनबाट तैँले आफूलाई बचाउनुपर्छ; तँ पूर्ण रूपमा पवित्र र निष्कलङ्क हुनुपर्छ। आज, मसँगै राजाको रूपमा शासन गर्न योग्य भएकाहरू कुनै पनि फोहोरबाट प्रदूषित छैनन्, किनकी म परमेश्‍वर स्वयम् हुँ, र म मेरो नाममा कुनै पनि अपमान चाहँदिन। यस्ता मानिसहरू मेरो परीक्षा लिन शैतानबाट पठाइएका हुन्, र तिनीहरू शैतानका अनुचरहरू हुन् जसलाई प्रत्याक्रमण गरिनुपर्छ (तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा फ्याँकिनुपर्छ)।
मेरो परिवार पवित्र र निष्कलङ्क छ, र मेरो मन्दिर भव्य र प्रतापी छ (अर्थात् म जे हुँ र मसँग जे छ तिनीहरूसँग त्यही छ)। आफूलाई इच्छा लागेअनुसार प्रवेश गर्ने र समस्या निम्त्याउने दुस्साहस कसले गर्छ? म तिनीहरूलाई पक्कै क्षमा दिनेछैन। तिनीहरूलाई पूर्ण विनाश गरिनेछ र ठूलो अपमान गरिनेछ। म बुद्धिमानी भएर कार्य गर्छु। तरबारविना, बन्दुकविना, र एउटा औँला पनि नउठाई, म मेरो विरोध गर्ने र मेरो अपमान गर्नेहरूलाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्नेछु। म सदाशयी छु, र यतिका हदसम्म शैतानले अवरोधहरूको सिर्जना गर्दा पनि, म स्थिर गतिमा मेरो कामलाई निरन्तरता दिन्छु; म त्यसमा ध्यान दिन्न र म त्यसलाई मेरो व्यवस्थापन योजनाको समापनबाट परास्त गर्नेछु। यो मेरो शक्ति र मेरो बुद्धि हो, र अझ यसभन्दा बढी, यो मेरो अन्त्यहीन महिमाको एक सानो हिस्सा हो। मेरो नजरमा, मेरो विरोध गर्नेहरू मेरा अभिप्रायहरूअनुरूप मैले, कुनै पनि समयमा, पैतालामुनि कुल्चेर मार्न सक्ने धूलोमा घस्री रहेका कीराहरू जस्तै हुन्। तर, म काम-कुराहरू बुद्धिसाथ गर्छु। तिनीहरूको सामना गर्न म मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई लगाउँछु; मलाई कुनै हतार छैन। म व्यवस्थित रूपमा र सूक्ष्म त्रुटिविना, विधिवत् रूपमा काम गर्छु। मबाट जन्मिएका ती ज्येष्ठ पुत्रहरूसँग म जे हुँ त्यो छ, र तिनीहरूले मेरा कार्यहरूमा अन्त्यहीन बुद्धि देख्‍न सक्छन्!
अघिल्लो: अध्याय ९०
अर्को: अध्याय ९२